အခေါက်ရွှေဈေး ကျပ် ၁၂ သိန်းထိ မြင့်တက် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၇- ပြည်တွင်း အခေါက်ရွှေဈေးကျပ် ၁၂ သိန်း အထိ ဩဂုတ် ၇ ရက်က မြင့်တက် ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အမေရိကန်-တရုတ်ကုန် သွယ်ရေး အခြေအနေကြောင့် အမေရိကန်နှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီတို့ တွင် စတော့ရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားသူများက ရှယ်ယာများကို ရောင်းကာ ရွှေဝယ်ယူမှုများလာ ကြသကဲ့သို့ ရုရှား၊ အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့က အမေရိကန်၏အရေးယူပိတ်ဆို့ မှုဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ကန်ဒေါ်လာကို လျှော့ကိုင်သည့်အနေဖြင့် ရွှေဝယ် ကြသောကြောင့် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး တက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ဝင်းက ပြောသည်။
“ရွှေဈေးတက်တော့ ဆိုင် တွေ အရောင်းရောအဝယ်ပါပါး တယ်။ ခု ကျပ် ၁၂ သိန်းဖြစ်ပြီးမှ နည်းနည်းလေးပြန်ကျတယ် ” ဟု ၄င်းကပြောသည်။
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးမှာ ဩဂုတ် ၆ ရက်တွင် တစ်အောင်စကန်ဒေါ် လာ ၁၄၆၃ ရှိခဲ့ရာမှ ဩဂုတ် ၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တစ်အောင်စ လျှင် ကန်ဒေါ်လာ ၁၄၈၄ အထိ ဈေးမြင့်တက်ခဲ့ရာမှ ညနေပိုင်း တွင် ၁၄၈၀ သို့ ဈေးအနည်းငယ် ပြန်ကျခဲ့သည်။
မြန်မာ့မီးလင်းအခေါက်ရွှေ ဈေးမှာ တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၁၁ သိန်း ၇ သောင်း ၂ ထောင် သာရှိခဲ့ရာမှ ဩဂုတ် ၇ ရက် မွန်း လွဲပိုင်းတွင် ကျပ် ၁၂ သိန်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက် ညနေပိုင်း၌ ကျပ် ၁၁ သိန်း ၉ သောင်း ၇ ထောင်သို့ ဈေးအနည်းငယ်ပြန် ကျခဲ့ကြောင်း ရွှေဈေးကွက်မှ သိရ သည်။
ရွှေဈေးမြင့်တက်လာသော် လည်း အခေါက်ဝယ်ရောင်း ဆောင်ရွက်သည့် ရွှေလုပ်ငန်း ရှင်များအဝယ်လိုက်မှုကြောင့် အရောင်းပိတ်ထားရသည်အထိ ပစ္စည်းပြတ်လပ်ခဲ့ကြောင်း ဩဂုတ် ၇ ရက်ကရန်ကုန်တိုင်း ရွှေအသင်းရုံးတွင် ပြုလုပ်သည့် ရွှေဈေးတည်ငြိမ်စွာဆောင်ရွက် နေနိုင်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင် များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်က ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ရွှေဈေး ကျပ် ၁၂ သိန်းအထိ မြင့်တက်လာသော် လည်း အဝယ်လိုက်မှုကြောင့် ဩဂုတ် ၇ ရက်က ကမ္ဘာ့ရွှေတစ် အောင်စလျှင် ကန်ဒေါ်လာ ၁၄၈၀၊ မီးလင်း အခေါက် (၁၆ ပဲရည်) တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၁၁ သိန်း ၉ သောင်း ၇ ထောင်၊ ၁၅ ပဲရည်တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၁၁၃၂၃၀ဝ ပေါက်ဈေးဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း ရွှေဈေးကွက်မှသိရသည်။
အမေရိကန်သတင်းစာတိုက်ကြီး နှစ်တိုက်ပူးပေါင်း၊ ကျဆင်းနေသော သတင်းစာထုတ်ဝေရေးပြန်လည် ကယ်မနိုင်အောင်ကြိုးစား
အမြန်လမ်းတွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက် တစ်ဦးသေ၊ ရှစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရွှေကျင်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကြောင့် နစ်နာဆုံးရှုံးသူများအား ၂ဝ၁၇-?
မုံရွာမြို့တွင် နှစ် ၂ဝ ကျော်ကြာ အသုံးမပြုတော့သော သုသာန်ဟောင်းနှစ်ခုကို လူထု အပန်းဖြေစခန်??